Mihazakazaka ny isa Manafosafo ny 100 no voan’ny coronavirus
Niampy 5 vaovao ireo olona voamarina fa tratry ny coronavirus, ka manome ny isan’ny voa hatramin’izay ho 93.
Fifampikasohana ny 4 dia lehilahy 49 taona sy vehivavy 62 taona eny amin’ny Hopitaly Befelatanana, ny 2 hafa dia lehilahy 57 sy 48 taona izay avy any Analanjirofo. Ny iray tamin’ireo tranga 5 vaovao kosa, dia mpandeha tamin’ny zotram-piaramanidina tonga teto Madagasikara ny 19 martsa izany hoe tafiditra ao anatin’ny « cas importé ». Efa naraha-maso hatry ny ela izy io, ary izao voamarina fa tratry ny covid-19 izao. Raha ny fitsinjaran’ireo tranga rehetra hatrizay izany dia 55 ny tranga avy any ivelany, ary 38 no voa vokatry ny fifampikasohana Niampy vaovao kosa ireo sitrana, ka ny 3 dia tany amin’ny hopitaly Morafeno Toamasina, ary ny 1 kosa teny amin’ny CHU Anosiala. 82 izany ny olona mbola tazonina eny amin’ny hopitaly. Miparitaka amina hopitaly samihafa eto amin’ny Nosy izy ireo ary misy ny fifandraisana isan’andro amin’ny CCO Covid- 19. Mitovy avokoa ny paikapaika na ny “protocole” hitsaboana azy ireo. Tahaka izany ihany koa ny fepetra hahafaha-mamaritra fa sitrana ny marary iray. Ny mampiseho soritr’aretina mampatahotra dia olona iray tany Toamasina satria tena sempotra be mihitsy ilay ary efa tena natahorana. Efa nahazo fitsaboana anefa izy io ary tsy dia misy atahorana aloha hatreto. Miaraka ny OMS sy ny fitondram-panjakana, ary ny mpitsabo amin’ny fiantsorohana ireo marary.